Ngelixa lingaqhelekanga, iifayili zinokumiselwa ukuba zingaphenduli
I- Ofisi yoBalo lwabaBalo base-United States i-imeyli i-imeyli ye-decencial count and the American Community Survey questionnaires kwizigidi zabantu baseMerika. Abantu abaninzi bacinga ukuba le mibuzo ixakeka ixesha okanye ingenangxamnye kwaye, ngenxa yoko, ayikwazi ukuphendula. Nangona kunjalo, ukuphendula kuwo onke amaphepha emibuzo kubalo lufunwa ngumthetho wesigqeba.
Nangona kungabonakali nto, i-US Census Bureau inokubeka iintlawulo ngenxa yokungaphumeleli ukuphendula iimbuzo zabo okanye ukunikezela ngolwazi ngobuxoki.
Ngokubhekiselele kwiSihloko 13, iCandelo 221 (Ubalo lwabantu, ukungavumi okanye ukungahoxiswa ukuphendula imibuzo; iimpendulo zobuxoki) ze-United States Code, abantu abahlulekayo okanye abenqaba ukuphendula kwifom yesibalo sokubuyiswa kweposi, okanye ukwenqaba ukuphendula kwisilandela uthabatha ubalo lwabantu, unokuhlawuliswa ukuya kuma-$ 100. Abantu ababonelela ngokubonelela ngolwazi lobuxoki kubalo-mali bangahlawulwa ukuya kuma-$ 500. I-Census Bureau ichaza ngekhompyutha ukuba phantsi kweCandelo lama-3571 yesiGaba 18, intlawulo yokungafuni ukuphendula uphando lwe-office ingaba ngu-5,000.
Ngaphambi kokumisela intlawulo, i-Census Bureau izama ukudibanisa kunye nokudibana nodliwano-ndlebe nabantu abangaphumeleli ukuphendula kwimibandela yokubalwa kwabantu.
Kwiinyanga ezilandelayo emva kokubalwa kwabantu, iminyaka engama-1.5 yezibalo zabalobi zivakatyelela ngendlu ngendlu kuzo zonke iindwendwe ezahluleka ukuphendula iimbuzo zemibuzo yoluntu. Umncedisi wabasebenzi uza kuncedisa ilungu lekhaya-okumele ukuba ubuncinane ubuneminyaka engama-15 ubudala-ekuzaliseni ifom yophando yoluntu.
Abasebenzi babalo babantu bangabonwa ngebheji kunye neBhodi yoBalo lwaBasebenzi.
Ubumfihlo beempendulo zababalo
Abantu abachaphazelekayo malunga nemfihlo zabo iimpendulo kufuneka baqonde ukuba, phantsi komthetho wesigqeba, bonke abasebenzi kunye namagosa e-Ofisi yoBalo lwaMasipala abavumelekile ukuba babelane ngolwazi lomntu kunye nolunye umntu, kubandakanya i-arhente yezenhlalakahle, ukufuduka kwamanye amazwe kunye nokunyanzeliswa kwamasiko, i-Internal Revenue Service , iinkundla, amapolisa kunye nomkhosi.
Ukuchithwa kwalo mthetho kuthwala izigwebo ze-5,000 zama-dollar kwiintlawulo kunye ukuya kwiminyaka emihlanu entolongweni.
Ngokungafani nokubalwa kwabantu kweminyaka eyi-10, eqhutywa rhoqo kwiminyaka eyi-10 (njengoko kufunwa yiCandelo I, iSigaba 2 soMgaqo-siseko), i-American Communities Survey (ACS) ngoku iyakuthunyelwa rhoqo kwiinyanga ezingaphezu kwezigidi ezintathu zase-US.
Ukuba ukhethiweyo ukuba uthathe inxaxheba kwi-ACS, uya kuqala ufumana ileta kwi-imeyile ethi, "Kwiintsuku ezimbalwa uza kufumana umbuzo wemibuzo kwi-imeyile ye-American Community Survey." Ileta iya kuqhubeka ithi, "Ngenxa yokuba ehlala eUnited States, ufunwa ngumthetho ukuba uphendule kule nzululwazi. "Ngaphezu koko, imvulophu iya kukukhumbuza ngesibindi ukuba," Impendulo yakho iyadingeka ngumthetho. "
Ulwazi oluceliwe yi-ACS lukhulu kakhulu kwaye lunzulu kunemibuzo emininzi kwimibandela yokubalwa kwabantu. Ulwazi oluqokelelwe kwi-ACS yonyaka lugxile ikakhulu kubemi kunye nezindlu kwaye zisetyenziselwa ukuhlaziywa kolwazi oluqokelelwe kubalo lweminyaka elishumi. Abacwangcisi baseBurhulumenteni, baseburhulumenteni nabemi kunye nabathatha umgaqo-nkqubo bafumana idatha ehlaziywe kutshanje eyinikezwa yi-ACS incedo ngakumbi kunokuba idatha imininzi yeminyaka eyi-10 ubudala ukusuka kubalo lweminyaka yobudala.
Ucwaningo lwe-ACS lubandakanya malunga nemibuzo engama-50 esetyenziswa kumntu ngamnye ekhaya kwaye ithatha malunga nemizuzu engama-40 ukugqiba, ngokwe-Census Bureau.
Iingxelo ezivela kwi-ACS zifaka isandla ekuboneleleni umfanekiso obalulekileyo waseMerika, kwaye ukuphendula ngokuchanekileyo kwi-questionnaire ye-ACS kubalulekile, "kuchaza iCensus Bureau. "Xa zisetyenziselwa ngokubambisana neenkcukacha zokubalwa koluntu, zikhona iinkcukacha ezivela kumaxwebhu e-ACS indlela esihlala ngayo njengesizwe, kuquka imfundo yethu, izindlu, imisebenzi kunye nezinye izinto ezininzi."
Iimpendulo zoBalo be-Intanethi ziza
Nangona i- Ofisi yoLanduva lokuPhatha kukaRhulumente iphendule iindleko , i-Census Bureau kulindeleke ukuba inikeze ukhetho lwama-intanethi kwi-2020 yeminyaka yeshumi. Ngaphantsi kwolu khetho, abantu bayakwazi ukuphendula imibuzo yabo yobalo ngokuvakashela iwebhusayithi ekhuselekileyo.
Amagosa ebalo lwabantu abathemba ukuba ukulungelelaniswa kwindlela yokuphendula e-intanethi kuya kwandisa izinga lokuphendula kwabantu, ngoko ke ukuchaneka kobalo.
Ukudlala njani umdlalo oBomvu, oMhlophe kunye neBlue Golf
Izihloko ze "Awunakukuthatha Nakho"
Indlela yokudibanisa kwixesha elingapheliyo
Kutheni i-Ocean Ocean?
Iingoma ezi-3 ezinkulu kakhulu zeJazz-Rock
Iimpawu ze-Anti-feminist zePhyllis Schlafly
Hlola indawo ezifana neMars apha emhlabeni
Okuthethwa YiBhayibhile Ngokuxolisa
Iingcaphuno ezivela kwi-"Gatsby enkulu"
I-Hampden-Sydney College ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Plesiosaurus, i-Reptile ye-Long-Necked Reptile